Umqeqeshi weChippa uphika eyokwenzela phansi abaqeqeshi esakwiPirates | News24
Umqeqeshi weChippa uphika eyokwenzela phansi abaqeqeshi esakwiPirates
Johannesburg - Umqeqeshi weChippa United uTeboho Moloi uyayiphika imibiko ethi wake wazama ukuphazamisa umsebenzi wabanye abaqeqeshi ngesikhathi esakwi-Olando Pirates.
Ekhuluma esemahhovisi e-PSL, lapho anikezwe khona indodo yokuba ngumqeqeshi ovelele kwi-Absa Premiership ngenyanga kaNovemba ngoMsombuluko, uMoloi ucacise okwakwenzeka esasiza abaqeqeshi phakathi kuka-2011 no-2015.
“Ngesikhathi ngisangumsisi kamqeqeshi ngangihlale ngizibona ngingumqeqeshi ngoba nami ngangiyidlulisa imiyalelo, kanti lokho kwakubukeka sengathi ngisho okwehlukile kunokushiwo umqeqeshi,” kuchaza uMoloi.
“Uma ukhulele kini, ungasukuma kanjani kudliwa uvele uyochamela phansi, kunokuba usebenzise indlu yangasese?
“Okushiwo abantu ngami kuyafana nalokhu, ukuthi ngasukuma etafuleni ngaya kochamela phansi.
“Angikaze ngikhiphe umyalelo ophambene nokamqeqeshi noma ongeke uyisize iPirates ukuba iwine.”